Govt Offers Free Electricity Bill for Four Months | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt Offers Free Electricity Bill for Four Months
Govt Offers Free Electricity Bill for Four Months
The Ministry of Electricity and Energy announced that it will provide free 150 units of electricity from August 1 to December 31. The ministry said that it is to encourage people who are facing difficulties both economically and morally. The country’s 2020 election is set to hold in November.
People will get free electricity of 150 units including service fees. Ifauser uses more than 150 units, the ministry will deduct K11,550, which is equivalent to 150 units, from the electricity bill.
The Ministry of Health and Sports has relaxed its restriction on public gatherings by allowing up to 30 people to gather starting from August 16 as Yangon, the most important commercial city in Myanmar, has not reported any new locally transmitted COVID-19 cases for other three months.
In addition to that, the National Committee for the Prevention, Control, and Treatment of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has also extended all the measures, which are scheduled to end on August 15, to August 31.
COVID – 19 ကြောင့် ပြည်သူများ စီးပွားရေးအရ၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ကြပ်တည်းခြင်း များစွာ ရှိနေခြင်းကြောင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) အထိ လစဉ် ၁၅၀ ယူနစ်အတွက် ဓာတ်အားခကျသင့်ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ကို ဆက်လက် ပေးသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
လစဉ် သုံးစွဲမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုယူနစ်များအနက်မှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား သုံးစွဲမှု (၁) ယူနစ်မှ (၁၅၀) ယူနစ်အထိ သုံးစွဲသူများကို သုံးစွဲယူနစ်အလိုက် ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေ နှင့် မီတာဝန်ဆောင်ခ အပါအဝင် ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး (၁၅၁) ယူနစ်နှင့်အထက် သုံးစွဲသူများကို ယူနစ် (၁၅၀) အတွက် ဓာတ်အားခကျသင့်ငွေ (၁၁၅၅ဝိ/-) ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
အိမ်သုံးအမျိုးအစား၌ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူများမှ (၁၅၁) ယူနစ်နှင့်အထက် သုံးစွဲမှုများအား အလွှာလိုက်သတ်မှတ်ချက်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးကိစ္စတစ်ရပ် အနေဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သော အိမ်သုံးမဟုတ်သည့် အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုမှ ပြည်တွင်းလူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှအပ ကျန်သုံးစွဲသူများ အားလုံးသည် ယခင်သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး တိုးမြှင့်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်နေ့အထိ (၇၅) ယူနစ်အတွက် ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ကို ဇူလိုင်လ ၁၀- ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထပ်မံ၍ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့ အထိ (၇၅)ယူနစ်အတွက် ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေကို ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ (၃၁)ရက်နေ့အထိ (၁၅၀) ယူနစ်အား ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသား အဆင့်ဗဟိုကော်မတီမှ (COVID-19) ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီး‌ရေးအတွက် (၁၅-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များ (ဖြေလျော့ပေးရန် လမ်းညွှန်ထားသော ကိစ္စရပ်များမပါ) အားသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျန်ရှိခဲ့သော ဇူလိုင်လ(၁၆)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့အထိ အခမဲ့ ရရှိသည့် (၇၅) ယူနစ်အတွက် ဓာတ်အားခကျသင့်ငွေ ကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့) ကို သြဂုတ်လမှ စတင်၍ ဓာတ်အားခတောင်းခံလွှာများတွင် လစဉ် စာရင်းညှိခုနှိမ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ထားသည်။
Previous articleIRD to Put Tax Stamps on Illegally Imported Liquors
Next articleLocal Investment Hits Over K1,500 Bln